जिल्ला अस्पतालमा स्टाफ नर्स छैनन्, उपचारमा समस्या – Rajdhani Daily
जिल्ला अस्पतालमा स्टाफ नर्स छैनन्, उपचारमा समस्या
बैतडी । जिल्ला अस्पताल बैतडीमा स्टाफ नर्स नहुँदा उपचार सेवामा समस्या भएको छ ।
अस्पतालमा चारजना स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहेको भएपनि गएको एक महिनायता अस्पताल नर्सविहीन भएको छ ।
अस्पतालमा नर्स नहुँदा प्रसूति सेवालगायतका सेवाहरु प्रवाहमा समस्या भएको अस्पतालका प्रमुख डा. जगदीशचन्द्र बिष्टले बताए ।
गर्भवतीको अल्ट्रासाउण्ड गर्ने कार्यमा समेत बाधा पुगेको उनले बताए, ‘आफू बाहिर भएको बेला अस्पातलमा अल्ट्रासाउण्ड सेवा बन्द हुने गरेको छ ।’
तालिम प्राप्त नर्सको सरुवा भइसकेको र नयाँ स्टाफ नर्स नआएकाले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको डाः बिष्टले गुनासो गरे ।
अस्पतालमा सञ्चालित जटील खालका प्रसूति सेवा दिन पनि गाह्रो भइरहेको उनले बताए ।
शल्यक्रिया गरी बच्चा जन्माउनुपर्ने महिलाहरुको शल्यक्रिया गर्दा डाक्टरको सहयोगीको रुपमा स्टाफ नर्स हुने भएपनि जिल्ला अस्पतालमा नर्स नै नहुँदा समस्या भएको छ ।
यस्तै जटील खालका प्रसूति सेवाहरु प्रभावित भएको जिल्ला अस्पातालले जनाएको छ । यस्तै जिल्लाको पाटनमा रहेको पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र मेलौलीमा रहेको केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि स्टाफ नर्सको दरबन्दी खाली रहेको छ ।
नर्सको दरबन्दी खाली हुदाँ सेवा प्रवाहमा ठूलो समस्या भइरहेको पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रमुख डाः नविन्द्र ढकालले बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिल्लाकै मध्यभागमा भएका कारण बर्थिङ सेन्टर तथा बिभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट समेत रेफर भएका बिरामीहरु आउने गर्छन् ।’
काजमा कार्यरत एकजना नर्सको सरुवा भएपछि जटिल प्रसूति सेवामा सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको डा. ढकालले जानकारी दिए । हामीले २४सै घण्टा सेवा दिनुपर्ने हुन्छ तर स्वास्थ्यकर्मी नै नहुदाँ कसरी सेवा दिने ? उनले प्रश्न गरे ।
स्टाफ नर्सको पदपूर्तिका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमा जानकारी गराएको भएपनि हालसम्म पदर्पूिी हुन नसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीले जनाएको छ ।
यस्तै तीनजना चिकित्सकको दरबन्दी भएको अस्पतालमा एकजनाले मात्रै काम कार्यरत छन् । दरबन्दीअनुसारको चिधित्सक अस्पतालमा नहुँदा उपचारका लागि स्थानीयहरु भारत तथा जिल्ला बाहिर जान बाध्य छन् ।
Tags: स्टाफ नर्स छैनन्